Naya Bikalpa | प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा - Naya Bikalpa प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा - Naya Bikalpa
प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा
प्रकाशित मिती: २०७५ बैशाख १०, ०९: ०३: ५७
हरिहर विरही – वरिष्ठ पत्रकार
मुलुक धेरै अघि जाने कोसिसमा छ भनिन्छ । हामीले यही सोचिरहेका छौं । त्यो आशा पूरा हुन्छ हुँदैन । त्यसको बारेमा पर्खिनै पर्छ । अहिले सबैको मुखबाट समृद्धिको नारा सुनिन्छ । सबै पार्टीहरुले समृद्धि शब्दलाई थेगोको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर चुनावमा कबुल गरिएका वाचाहरुलाई पूरा गर्न राजनीतिक दलहरुले इमानदारिता देखाए भने समृद्धि सम्भव छ । ठूलो संघर्षपछि जनताले प्राप्त गरेको परिवर्तनको संस्थागत गर्नुपर्छ । अनेकौं अवरोधहरु हटाउँदै मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याइएको छ ।
राजनीतिक पद्धति सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । राजनीतिककर्मीहरुको सोंच, शैली, चरित्र, व्यवहारमा कुनै पनि परिवर्तन आएको देखिदैन । नेताहरु झन्झन् विलासी बन्दैछन् । जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने नेताहरुको विलासी जीवनका कारण जनतामा नेताप्रति विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । जनताले सामान्यभन्दा सामान्य सेवासमेत सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । नेताहरु सामान्य बिरामी पर्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न पुग्छन् ।
जुन उपचार स्वदेशमै सम्भव छ, त्यो उपचार गर्न विदेश पुग्नुले सकारात्मक सन्देश गएको छैन । सरकारले अर्बौ रुपैयाँ आफ्ना कार्यकर्ता र सहयोगीको नाममा बाँडेको सुनिन्छ । जुन रकम जनताको जीवन र मुलुकको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यो रकम केही नेताको स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरिएको छ । जनतामा यस्ता कायर्यको विरोध रहन्छ । प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारका कामहरुको खुलेर विरोध जनाउँछन् । तर, त्यही प्रतिपक्ष सरकारमा पुगेपछि आफैंले विरोध गरेका कामहरुको बाटोमा हिँडछन् । कुनै संकोच जनभावना विपरीत बाटोमा हिँड्छन् । राज्यको ढुकुटी सक्ने र विकृतिलाई प्रश्रय दिने होडवाजी चलेको छ ।
जनतालाई समृद्धिको अनुभूति गराउन राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउनु पर्दछ । मुलुक धनी हुनुपर्छ । समृद्धिको लागि यो अनिवार्य सर्त हो । हाम्रो मुलुक गरिब तर व्यक्तिहरु सम्पन्न छन् । के गर्नु हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कहाली लाग्दो छ । अहिले अपनाइएको संघीय प्रणाली महँगो छ । दक्ष जनशक्ति देश छोडेर विदेश हानिदैछन् । देशमा भएको स्रोतसाधनहरुको चरम दुरुपयोग तीव्र रुपमा भइरहेको छ । विकासका योजनाहरु अवरोधहरुको बीचमा समृद्धिको अभियान घुसारएको छ । समृद्धि हुनुको अर्को अर्थ देश धनी बन्नु र आयोजना बन्नु मात्रै होइन । हरेक जनताहरुले न्यायपूर्ण तरिकाको जीवनयापन गर्ने वातारण हुनुपर्छ ।
स्वस्थ्य, शिक्षित, खुसी र सुखीसहितको समृद्धि अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । यो दिशामा हाम्रा राजनीतिक दलहरु इमान्दार बन्छन् या बन्दैनन् ? त्यो कुरा नहेरिकन अहिले नै समृद्धिको लागि ढुक्क भएर बस्ने स्थिति रहँदैन । अस्थिरताको चाहना अबका दिनहरुमा राजनीतिक दलहरुले राख्नु हुँदैन । अब मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको परिणामले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निक्कै फाटो आएको छ । प्रतिपक्ष निक्कै कमजोर देखिएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा पछिकै इतिहासमा प्रतिपक्ष यति कमजोर अवस्थामा कहिल्यै देखिएन । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने विभिन्न किसिमका विकृति देखिन थाल्छन् ।
जनताको मतको दम्भका आधारमा सरकार पक्ष निरंकुश शैलीमा अधिनायकवादी कदममा काम गर्न थाल्छन् । राज्यका साधन स्रोतहरु दुरुपयोग हुने खतरा बढ्छ । जनताको स्वतन्त्रता सीमित नहोलान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले भविष्यका कल्पना र सपनाहरु कसरी पूरा होलान् ? त्यो प्रतिपक्षको विषय नै हो । निर्वाचनमा कबुल गरेका वाचाहरु दलहरुले इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
प्रतिपक्षले सरकारका गतिविधिहरुको गुण र दोषका आधारमा मूल्याकंन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । आफ्ना नाराहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने इतिहासमा नभएका कामहरु हुने आशा गर्न सकिन्छ । काम नगर्ने चरित्र देखाएका हुनाले नेताहरुबाट जनताले यसै विश्वास गर्ने स्थिति छैन । सरकारले गरेका कामहरु र प्रतिपक्षले लिएर अडानहरुको आधारमा मुलुक समृद्धि बन्न्ेछ । इमन्दार नहुने हो भने विगतको जस्तै समस्या दोहोरिन्छ ।
एउटा माघले जाडो जाँदैन भने जस्तै लोकतन्त्रमा आज सरकामा भएको राजनीतिक दल भोलि प्रतिपक्षमा पुग्न सक्दछ । यो सत्यलाई आत्मसात् गरेर दीर्घकालीन रुपमा बृहत् मुलुक र जनताको हित हुने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सन्तुलनले मुलुकको विकास र स्थिरतालाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सहकार्य र सहमतिमा जानुको विकल्प छैन । (साभार ः स्मारिका रिपोर्टस क्लब नेपालबाट)
२०७५ बैशाख १०, ०९: ०३: ५७